Ngwaahịa ndị na-emepụta, ndị na - ebunye ya - Chinalọ ọrụ Ngwaahịa China
Ulọ ọkụ ọkụ nke UV
Ndị na-adọrọ adọrọ NIR
High Fluorescent Red Dye
Up converting ink
Ihe na-eme ka ekpughere Thermochromic
UV fluorescent ink maka ...
High Fluorescent Red dai dai ...
Uv fluorescent pigmenti maka ...
Thermochromic ink maka t ...
Photochromic ink UV ezì ...
UV fluorescent pigmenti maka mgbochi ụgha
UV fluorescent inkya onwe ya enweghị agba, mgbe ọ nwụsịrị ike nke ìhè ultraviolet (uv-365nm ma ọ bụ uv-254nm), ọ na-ewepụta ngwa ngwa ma gosipụta mmetụta agba ọkụ doro anya. Mgbe ewepụtakwara ọkụ, ọ na-akwụsị ozugbo wee laghachi na ọnọdụ adịghị ahụ anya mbụ.
High Fluorescent Red Dye maka Greenhouse Nkiri
High Fluorescent Red Dye bụ High-eme Fluorescent dyes maka plastik agba?, o nwere magburu onwe weatherfastness ,, Nnukwu nkwụsi ike dị elu, Oke chroma!
Ihe UV na-acha odo odo n’onwe yaenweghị ntụpọ, ma mgbe ọ nwụsịrị ike nke ọkụ ultraviolet (uv-365nm ma ọ bụ uv-254nm), ọ na-ewepụta ngwa ngwa ma gosipụta mmetụta agba ọkụ doro anya. Mgbe ewepụtakwara ọkụ, ọ na-akwụsị ozugbo wee laghachi na ọnọdụ adịghị ahụ anya mbụ.
Okwu Thermochromic maka thermochromic paint Thermochromic Ink Thermochromic Ink
Themochromic pigmentsmejupụtara nke micro-capsules nke na-agbanwe agba agba agba. Mgbe a na-eme ka ọnọdụ okpomọkụ gaa na ọnọdụ okpomọkụ akọwapụtara na ink na-agba site na agba na agba (ma ọ bụ site na otu agba na agba ọzọ). Agba ahụ na-alaghachi na agba mbụ dị ka pigmenti jụrụ.
Photochromic pigmenti UV ink agba mgbanwe ntụ ntụ site na ìhè anyanwụ
Photochromic ink bụ ụdị microcapsules. Na ntụ ntụ mbụ etinyere na microcapsules.Powder ihe nwere ike ịgbanwe agba na ìhè anyanwụ. Kinddị ihe a nwere njirimara nke agba dị nhịahụ na ike ihu igwe ogologo oge. Enwere ike ịgbakwunye ya na ngwaahịa kwesịrị ekwesị.
Qingdao Topwell Chemical Akụrụngwa Co., Ltd.